I-Paragon ikhiphe ukusetshenziswa kwe-NTFS kwe-Linux kernel | Kusuka kuLinux
UKonstantin Komarov, uMsunguli kanye ne-CEO yeParagon Software, uthumele isethi yezimagqabhagqabha kuhlu lweposi le-Linux kernel nge ukuqaliswa ngokuphelele kohlelo lwefayela le-NTFS esekela imisebenzi yokufunda nokubhala. Ikhodi yale sethi yokukhishwa ikhishwa ngaphansi kwe-GPL.
Ukuqaliswa isekela zonke izici zenguqulo yamanje ye-NTFS 3.1kufaka phakathi izimfanelo zefayela ezinwetshiwe, imodi yokuminyanisa idatha, ukusebenza kahle ngezikhala zamafayela, nokuphindwa kwezinguquko kubhaliso ukubuyisa ubuqotho ngemuva kokwehluleka.
Isilawuli esiphakanyisiwe kuze kube manje sisebenzisa ukwenziwa kwaso okwenziwe lula Ukubhalwa kwe-NTFS, kepha ngokuzayo kuhlelwe ukwengeza ukusekelwa okugcwele kwelogi ngaphezulu kwe-JBD (log block device) etholakala ku-kernel, lapho i-ext3, ext4 ne-OCFS2 journaling ihlelwe khona.
Ohlwini lwamakheli, I-Paragon ibhala okulandelayo:
Lesi siqeshana singeza umshayeli we-NTFS wokufunda nokubhala ku-fs / ntfs3.
Ngokuhlangenwe nakho kwamashumi eminyaka ekuthuthukisweni kohlelo lwefayela nokutholakala kokuhlolwa okukhulu, thina eParagon Software GmbH sifuna ukwenza umnikelo wethu emphakathini ovulekile ngokunikeza ukuqaliswa komshayeli we-NTFS Read-Write we-Linux kernel.
Sihlela ukusekela le nguqulo ngemuva kokuthi i-codebase ihlanganisiwe futhi ingeze izici futhi ilungise izimbungulu. Isibonelo, ukuxhaswa okuphelele kwe-JBD journaling kuzongezwa kuzibuyekezo zakamuva.
Isilawuli sisuselwa kusisekelo esivele sikhona sekhodi yomkhiqizo kusuka ku-Paragon Software futhi ihlolwe kahle. Amachashazi aklanywe ngokuya ngezidingo zokulungiselela ikhodi ye-Linux futhi aziqukethe izixhumanisi ezengeziwe ze-API, ezivumela umshayeli omusha ukuthi afakwe kwikhenela enkulu.
Lapho ama-patches esefakiwe ku-kernel eyinhloko ye-Linux, iPargon Software ihlose ukuhlinzeka ngokulungiswa, ukulungiswa kwamaphutha, nokuthuthukiswa kokusebenza.
Nokho, Ukushumeka ku-kernel kungathatha isikhathi ngenxa yesidingo sokuthi umuntu wesithathu abuyekeze ikhodi ehlongozwayo. Emibhalweni eposini, kunezinkinga zokukhuphuka nokungahambisani nezidingo eziningi zokwakhiwa kwama-patch.
Isibonelo, kuhlongozwa ukuthi kuhlukaniswe isichibi esithunyelwe sibe izingxenye, njengoba imigqa eyizinkulungwane ezingama-27 isigaxa isiningi futhi idala ubunzima ekubuyekezweni nasekuqinisekisweni.
Kufayela le-MAINTAINERS, kunconywa ukuthi uchaze ngokusobala inqubomgomo yokuqhubeka nokugcinwa kwamakhodi futhi ukhombise igatsha le-Git lapho kufanele kuthunyelwe khona ukulungiswa. Iphinde iveze isidingo sokuvuma ukufaka ukufaka okusha kwe-NTFS lapho kunesidala se-fs / ntfs esidala esisebenza ngemodi yokufunda kuphela.
Phambilini, ukuthola ukufinyelela okugcwele kumahlukanisi we-NTFS kusuka kuLinux, bekufanele ngikwenze sebenzisa umshayeli we-FUSE NTFS-3g, esebenza esikhaleni somsebenzisi futhi enganikeli ngokusebenza okufunwayo.
Lo mshayeli akazange abuyekezwe kusukela ngo-2017, njengomshayeli we-fs / ntfs wokufunda kuphela. Bobabili abashayeli badalwe yiTuxera, yona, efana neParagon Software, enikeza umshayeli ophethe i-NTFS osatshalaliswa ukuhweba.
Kufanele ukhumbule ngo-Okthoba ngonyaka odlule, kulandela ukushicilelwa kwemininingwane etholakala esidlangalaleni yiMicrosoft kanye nokunikezwa kwamandla okusetshenziswa kwamahhala obunikazi be-exFAT ku-Linux, IPargon Software ivule ikhodi yayo yesilawuli ngokusetshenziswa kwe-exFAT FS.
Uhlobo lokuqala lomshayeli belukhawulelwe ekusebenzeni kokufunda kuphela, kepha inguqulo enikwe amandla wokubhala ibisakhiwa.
Lawa ma-patches ahlala engafunwanga, futhi umshayeli we-exFAT ohlongozwayo yi-Samsung futhi wasetshenziswa ku-firmware yezinkampani ze-Android Smartphones zafakwa ku-kernel kernel.
Lesi sinyathelo sibukwe kabuhlungu yiParagon Software, obekugxeka ukusetshenziswa okuvulekile kwe-exFAT ne-NTFS.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Paragon ikhiphe ukusetshenziswa kwe-NTFS kwe-Linux kernel
uma iPargon ihlinzeka ngekhodi ephelele yomthombo, nelayisense ehloniphekile, asikho isizathu sokungayisebenzisi,